24-kii Saacba Immisa diyaaradood ayaa isticmaasha hawada Soomaaliya? - Caasimada Online
Home Warar 24-kii Saacba Immisa diyaaradood ayaa isticmaasha hawada Soomaaliya?
24-kii Saacba Immisa diyaaradood ayaa isticmaasha hawada Soomaaliya?
Muqdisho (Caasimada Online) – C/Waaxid Cumar Sheikh Axmed, agaasimaha guud ee Hay’adda duulista iyo saadaalinta Hawada ayaa ka hadlay diyaaradaha maalintii iyo habeenkii isticmaala hawada Soomaaliya.
Agaasimaha ayaa sheegay in ku dhawaad 150 ilaa 200 oo diyaariyadeed ay isticmaalaan maalintii iyo habeenkii hawada dalka Soomaaliya, waxaana lacagaha diyaaradahaasi laga qaado ku dhacaan dalka Kenya.
Agaasimaha hey’adda duulista iyo saadaasha hawada waxaa uu ka hadlay in hey’addiisa ay gacanta ku heyso dhammaan hawada Soomaaliya, isagoo intaa raaciyay in garoomadaas ay isugu jiraan sideed(8) garoon oo ku yaallo magaalooyinka waaweyn sida Hargeisa, Berbera, Boosaaso, Galkacyo, Muqdisho, Kismaayo iyo magaalooyin kale iyo illaa 30 garoon kale oo macmal ah.
Ugu dambeyntii, Agaasimaga guud ee hey’adda duulista iyo saadaasha hawada mudane Cabdiwaaxid Cumar waxaa uu rajo fiican ka muujiyay in Soomaalida ay maamuli karaan hawada, isagoo sheegay in ay jiraan dad Soomaali ah oo si fiican u tababaran oo arrintaasi qaban kara.